Accueil > Gazetin'ny nosy > Morombe: Manampatra fahefana ilay lehiben’ny distrika HVM
Morombe: Manampatra fahefana ilay lehiben’ny distrika HVM
Tena mampiasa ny fahefana maha mpikambana eo anivon’ny antoko HVM (Hery vaovao ho an’i Madagasikara) azy tanteraka ity lehiben’ny distrika any Morombe ity. Tsy fitantanan-draharaham-panjakana intsony no ataon’ingahy José any an-toerana fa toa ireo lehiben’antoko
pôlitka HVM tanteraka. Anjakazakan’ity sefon’ny distrika ity ny volan’ny Kômitin’ny fampandrosoana ifotony (CLD), hoy ny depiote any an-toerana ingahy Rakotomalala Lucien. Voatery tsy maintsy hitondra ny raharaha amin’ny fitsarana ity depiote ity noho ny fanodinkodinana ny vola sy ny fanamparam-pahefana ataon’ity sefon’ny distrika ity raha nitafa taminay izy omaly tetsy Tsimbazaza ny talata faha 20 febroary 2018. Tsy rariny ary tena tsy rariny no ataon’ingahy sefon’ny distrika, hoy hatrany izy ary manao tany lavitra andriana tanteraka. Mampiasa ny maha HVM azy ity sefon’ny distrika ity araka ny fitantarany hatrany. Ataon’ity sefon’ny distrika ity amin’ny alalan’ny antoko HVM ny volan’ny CLD any an-toerana ankehitriny. Tsy fanarahan-dalàna no mitranga satria izy indray no toa filohan’ny CLD izay andraikitra omen’ny lalàna ny depiote. Ny sefon’ny distrika raha ny voalazan’ny lalàna dia mpitan-tsoratra ihany sy isan’ireo mpamoaka vola avy any amin’ny mpitahiry volam-panjakana.
Ankehitriny dia tsy nasainy hanatanteraka ny fizarana ny môtô ho an’ny ben’ny tanàna amin’ny kaominina 9 ny depiote satria hono tsy HVM. Tsy nomeny koa ny môtô iray izay tokony hanatanterahan’ny depiote ny asany amin’ny fanaovana tatitra any amin’ny kaominina na efa nisy ny fandaniana izany teo amin’ny mpikambana ao amin’ny CLD. Ny raharaha ho fampiasana ity vola ity sy ny asa fanomezana izany dia ny depiote ihany no filohany nefa tsy avelan’ilay sefon’ny distrika raha ny nambaran’ity solombavambahoaka ity ihany.
Manaraka ity raharaha ity, nisy vola 6 000 000 ariary tamin’ny volan’ny CLD tamin’ny taona 2016 no tsy hita izay nanaovan’ingahy sefon’ny distrika azy nefa tapaka tao amin’ny komity fa hampiasaana tamin’ny fanaterana ny angadin’omby izay tsy maintsy naterina any amin’ny kaominina izany. Noho io raharaha io dia nilaza ny depiote Lucien Rakotomalala fa hitondra ny raharaha eo anivon’ny fitsarana, ary amin’ny sampan-draharaha manaraka ny fampiasam-bolam-panjakana koa.
Raha ny voalazan’ity depiote ity dia mieritreritra ny hizara ny volan’ny CLD ny ben’ny tanàna sy ny sefon’ny distrika nefa tsy nanaiky izany ny tenany ka izany no isan’ny olana any Morombe amin’izao fotoana izao.
Fampihavanam-pirenena: Hanatanteraka fihaonambe any Fianarantsoa ny CRN
Raha efa mitodika any amin’ny fifidianana daholo ny ankamaroan’ny mpanao pôlitika malagasy dia mbola misy kosa ireo mihevitra fa ny fampihavanam-pirenena aloha no tokony hirosoana mialohan’ny zava-drehetra, mba hisorohana krizy vaovao mety hitranga eto amin’ny firenena. Anisan’izany ireo mpikambana eo anivon’ny CRN (Komity ho an’ny Fampihavanam-pirenena) tarihin’ny minisitra teo aloha, Tabera Randriamanantsoa. Ho azy ireo dia tsy azo ihodivirana ny fanatanterahana ny fampihavanam-pirenena, indrindra fa amin’izao taona hanaovana ny fifidianana filoham-pirenena izao. “Raha izao zava-misy eto amin’ny firenena ankehitriny izao no hiditra amin’izany fifidianana izany isika dia azo antoka fa korontana sy fifanjevoana no hiseho eto amin’ity Madagasikara ity. Ekena fa tsy maintsy hatao ny fifidianana tahaka izay misy amin’ny tany demôkratika rehetra, saingy ny fampihavanam-pirenena aloha no tokony hirosoantsika Malagasy satria mbola maro ny olana tsy maintsy vahana”, hoy ny mpitarika ny CRN, Tabera Randriamanantsoa. Manoloana izany indrindra dia handray ny andraikiny ny komity ka hiroso amin’ny dingana lehibe eo amin’ny fanatanterahana izay fampihavanam-pirenena izay. Raha ny fanazavana nomen’ny mpitarika ny CRN dia hisy afaka herinandro vitsy ny fihaonambe na fikaonan-doha lehibe izay ho karakarain’izy ireo any Fianarantsoa. Antsoina handray anjara amin’izany fikaonan-doha izany daholo ny solontenan’ny faritra 22, ary ho hita ao anatin’izany daholo na ny mpanao pôlitika, fiarahamonim-pirenena, raiamandreny ara-drazana sy ara-panahy, mpahay tantara, mpahay fiaraha-monina, sns sns. Dingana voalohany ity hatao any Fianarantsoa ity ka ny tanjona dia tsy inona fa ny ahatongavana amin’ny fampihavanam-pirenena tena izy, raha ny fanazavana nomen’ingahy Tabera Randriamanantsoa. Nambarany fa hisy ny fehin-kevitra lehibe hivoaka amin’io fikaonan-doha io, ary izany fehin-kevitra izany no hitondrana ny fampihavanana hatao eto amin’ny firenena. Mbola tsy voafaritra aloha hatreto ny daty hanaovana izany fa ho fantatra ny be sy ny maro tsy ho ela, raha ny nambaran’ny mpitarika ny CRN ihany. Inona moa izany no zava-misy eto amin’ny firenena ankehitriny fa dia misy ny rafitra mijoro eo anivon’ny fanjakana izay natao hiandraikitra manokana ny fampihavanam-pirenena, ny CFM (Filankevitra ny Fampihavanana Malagasy), ary mirazotra amin’izay kosa dia misy ny CRN izay hanatanteraka ny fampihavanam-pirenena.